Maraq Garlic: 3 cuntada guriga lagu kariyo ee si fudud loo diyaariyo - Hagaajinta Caafimaadkaaga - TELES RELAY
ACCUEIL » rasiidhada Maraq Garlic: Cuntooyinka guriga ee 3 si fudud ayaa loo diyaarin karaa - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Maraq Garlic waa nooc caan ah oo loo yaqaan "gastronomi". Haddii aadan waligaa dhadhamin maraq toon, maxaad sugaysaa? Waxaan halkan kugu casuumeynaa si aad u ogaato saddax maraq oo maraq ah oo toon ah oo waliba fudud si aad u doorato midka ku habboon dhadhankaaga.
Garlic waxay u dhalatay Bartamaha Aasiya, iyada oo ay ugu wacan tahay dhadhanka iyo udgoonka, ayaa loo dhoofiyay adduunka oo dhan. Cuntadan waxaa lagula talinayaa ku biirinta macdanta sida fosfooraska iyo iodine iyo sidoo kale qaadashadeeda fiitamiin B6.
Maraqa toonta waxaa sidoo kale loogu yeeri karaa maraq Castilian. Maskaxda ku hay in had iyo jeer ay suurogal tahay in la diyaariyo karinayo cuntada si aad uhesho dhadhankaaga iyada oo lagu daro ama laga saaro hal ama in ka badan maaddooyin. Abwaanku!
1. Maraq toon ah oo maraq ah
Cuntadani maraq ee maraqani waxay u baahan tahay maaddooyin aad u yar, waana wax ku habboon khudradda iyo vegan.
Haddii aad guriga ku leedahay saaxiibo vegan ah, Cuntadani macaan leh waxay noqon kartaa ikhtiyaar weyn. Waa, weliba, waa wax aad u fudud in la diyaariyo.
Waxyaabaha ay ka kooban yihiin (qofkiiba)
Xammuuska toonta 2
30 g rootiga jir ah (rootida laga bilaabo maalintii ka hor)
1 / 4 qaaddo yar oo paprika macaan ah
1 + 1 / 2 qaado oo ahsaliid saytuun ah oo bikro ah oo dheeraad ah
1 l oo biyo ah
Cusbo iyo basbaas (xilliga firaaqada)
Iska yaree rootiga la googooyey ama si khafiif ah loo jar jaray ka dibna u xajiso gadaal.
Kuleyli saliida saytuunka digsi.
Foogso toonyada toonta, u jarjar dhuuban oo ku kari digsi weelka saliidda saytuunka ah ilaa ay ka noqonayaan midab dahabi ah oo fiican.
Kudar rootiga adigoon shidin si aadan u diyaarin.
Ku dar paprika macaan iyo walaaq.
Shub hal litir oo biyo ah, ka dib cusbo iyo basbaas sidaad rabto.
Ku kari kuleylka sare ilaa karkaraya.
Kuleylka hoos u dhig oo ha u kariyo illaa toban daqiiqo oo kale ama ilaa rootigu jebiyo.
Maqaalkan ayaa sidoo kale laga yaabaa in aad xiiseyneyso: Sida loo diyaariyo majones vevan delicious
2. Maraq Garlic leh chorizo
Cuntadani toon iyo chorizo ​​waa qayb ka mid ah cuntada sida maraqa toonta. Cuntadani waa, shaki la'aan, waa mid ka mid ah cuntada sida maraqa toonta ee ugu macaan sidoo kale mid ka mid ah kuwa ugu fudud ee loo diyaariyo.
Laakiin sidoo kale waa cunno ka roon sidii loogu talagalay calories iyo dufan. Kordhinta chorizo ​​waxay keentaa kalooriyo fara badan iyo sidoo kale kolestarool, sababta cuno-qaadashadaani aysan ahayn kuwa ugu caafimaadka badan. Si kastaba ha noqotee, dhadhanka cuntada marmarka qaarkood ma saameynayso caafimaadkaaga.
Xammuuska toonta 4
1 jeex rooti adag ah
130 ml caano
Milixda cusbada iyo paprika macaan (waqtiga firaaqadaada)
1 l ee maraq hilibka
Saliid saytuun ah oo bikro ah oo dheeraad ah (cadadka loo baahan yahay)
Ku shub qashin saliid saytuun ah digsi iyo kuleyl.
Kala yaree toonyada toonta kuna dhex dhig saliida ilaa ay ka noqdaan midab dahabi ah oo fiican.
U gooyaa chorizo ​​googooyo iyo sidoo kale rootida oo ku dar maaddooyinkaas dheriga. Si fiican u walaaq.
Maraq ku dar oo isku kari.
Ka dib yaree kuleylka oo u oggolow ku kari 10 daqiiqo ama ilaa rootigu jebiyo.
Waa waqtigii lagu kalulayn lahaa labada ukumood iyadoo si joogto ah loo ruxinaayo shan daqiiqo. Fikradda ayaa ah in la helo kareem.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad samayso waa inaad u adeegto oo aad ku raaxaysato cuntadaada. Cunto wanaagsan!
3. Maraq Garlic leh ukunta ukun leh
Ukumaha waxay bixiyaan borotiin tayo sare leh iyo tamar badan.
Intaa waxaa sii dheer, waxay ka kooban yihiin qaybo isku dheelitiran oo acids amino muhiim ah, waana sababtaas tan lagu talinayo in la cuno dhowr jeer usbuucii. Hal daraasad ayaa xittaa sheegaya in cunista hal ukun maalin kasta inaysan keenin nooc kasta oo halista wadnaha.
150 g rootiga
1 l ee maraq khudradda
1 qaado oo macaan paprika macaan
Saliid saytuun ah oo bikro ah oo dheeraad ah (ayaa loo baahan yahay)
Cusbo (waqtigaaga firaaqada ah)
Diirka ka jar oo toon googooyaa xaleef dhuuban.
Ku shub kala firidhsan saliid saytuun ah qalfoofka iyo kuleylka.
Waxaad ku shiishaa toonyada toon, ka dibna waxaad u googooysaa rootida khafiif ah oo aad markaas ku dhex dari doontaa digsiga ilaa toonyadu ay ka qaadan doonaan midab dahab ah oo fiican.
Ku dar paprika macaan, ka dibna wax walba walaaq.
Hadda ku dar maraq khudradda, cusbo sida aad jeceshahay, ka dibna isku kari ilaa laba daqiiqo.
Maraq ka saar kuleylka oo ugu adeeg weel ku habboon foornada.
Hal ukun saar maraq kasta oo ku kari 180ºC ilaa maraqyada ayaa ka sii weynaan doona.
Ku qurxin taarikada dhir.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad ku raaxaysato maraqaaga! Cunto wanaagsan!
Maqaalkan ayaa sidoo kale laga yaabaa in aad xiiseyneyso: Samee baradhada udgoon ee udgoon ee udgoon ee udgoon leh miraha la kariyo ee guryaha lagu kariyo
Cuntooyinkan maraq ee maraqa toonta ee si fudud loogu diyaariyo Dharka xiro oo bilow!
Ha ka waaban inaad ka mid dhigto waxyaabaha aad doorbidday. Had iyo jeer waxaan kuu sheegaynaa: Cunto karinta, xadka, waa male awaalkaaga oo hoos u dhigaya!
Kahor intaadan ka tagin, ka arag hoosta fikradaha dheeraadka ah ee diyaarinta maraqa toonta oo ku habboon dhadhankaaga:
Oo maxaa Bayonne ham?
Waxaad ku bedeli kartaa paprika macaan oo paprika adag leh
Isku darista khudradda sidoo kale waa fikrad wanaagsan: a leekboqoshaada boqoshaada, zucchini ama karootada ayaa ah xulashooyin aad u fiican
Cuntada baastada oo ay ku jirto khudradda iyo liinta
Baastada oo ay ku jiraan 'prawns' iyo liin waa weel ay ka sameysan yihiin waxyaabaha saxda ah, ee caafimaadka u leh, nafaqo leh iyo cunno cunid. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/soupe-a-lail-3-recettes-maison-faciles-a-preparer/
Cuntooyinka cuntada ee loo yaqaan '3' ee loogu talagalay cuntooyinka kaloriin ee hooseeya - Hagaajinta Caafimaadkaaga